Huawei ga-enwe sistemụ arụmọrụ ya maka ọdịda a | Gam akporosis
Sistemụ arụmọrụ nke Huawei ga-adị njikere n'oge mgbụsị akwụkwọ
Huawei bụ onye isi na-akwado izu a. Couplebọchị ole na ole gara aga ka akwadoro na akara ndị China na-anọ enweghị mmelite gam akporo na ekwentị ha, na mgbakwunye na ịhụ ngwa na ọrụ Google ka egbochiri n'ụdị ha ndị ọzọ. Ọnọdụ dị mgbagwoju anya, mana nke dị na mgbanwe, ugbu a ụlọ ọrụ ahụ nwere nke na-ewe ọnwa atọ. Maka nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe iji sistemụ arụmọrụ ya na ekwentị ya.
Ọnwa ole na ole gara aga karịa Huawei n'onwe ya kwenyesiri ike na ha enweela sistemụ arụmọrụ ha. Sistemụ arụmọrụ ị na-amalite ịbụ asịrị, ma anyị amataworị mgbe ọ ga-abịa n'ụzọ ọchịchị. Ebe ọ bụ na a na-atụ anya na ọdịda a ọ ga-adị njikere ma rụọ ọrụ na ekwentị nke ika ahụ.
Aha nke sistemụ nrụọrụ a na-anọgide na-akwadoghị. Enwere ndị mgbasa ozi na-ekwu na ọ ga-abụ Kirin OS, ọ bụ ezie na mgbasa ozi ndị ọzọ na-enye aha Chinese dị iche. Mana n'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-echere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ịhapụ anyị data ndị ọzọ na nke a. Ihe anyị maara bụ na mmalite ya ga-abụ afọ a. Kwadoro site na CEO nke Huawei.
1 Mwepụta nke Huawei sistemụ
2 Gam akporo ngwa ndakọrịta
Mwepụta nke Huawei sistemụ
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela nke ahụ sistemụ nrụọrụ a ga-abata na ọdịda nke afọ a. Nke a bụ amụma ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ike igbu oge, n'ihi na ha ga-eme ụdị nyocha niile. N'okwu ahụ, enwere ike igbu oge ruo oge opupu ihe ubi n'afọ ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ gaghị abụ ikpe ahụ. Yabụ n'ime ọnwa ole na ole, ọ ga-abụrịrị nke gọọmentị na njedebe nke 2019 a.
Nke a Huawei sistemụ ga-dakọtara na ụdị ngwaọrụ niile. Enwere ike iji ya na ekwentị, kọmpụta, mbadamba, telivishọn yana akwa. N'ụzọ dị otú a, ngwaọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ nwere n'ahịa ga-enwe ike iji ya. Ndi ozo nke Honor ga eji ya, dika odi ugbua. Companylọ ọrụ ahụ si otú a na-eweta echiche yiri nke Fuchsia OS, sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ niile.
Enwere ọtụtụ asịrị banyere sistemụ arụmọrụ sitere na ndị nrụpụta. Ebe ọ bụ na e nwere ndị mgbasa ozi na-ekwu okwu ahụ ga-dakọtara na ngwa gam akporo. Ka ndị ọrụ wee nwee ike ịga n'ihu ịnweta ngwa ndị a na ama ama ha oge niile. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịmegharị ngwa ndị a, ka ha wee nwee ike imeghari n'ụzọ ka mma na sistemụ arụmọrụ Huawei. Nke a bụ ihe ga-eme ka arụmọrụ ka mma n'ime ha. Rumorsfọdụ asịrị na-arụtụ aka na mmelite arụmọrụ nke 60%. Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe akwadoro.
Otu esi zoo ọkwa na Huawei na Honor ekwentị
Gam akporo ngwa ndakọrịta
Otu igodo na sistemụ arụmọrụ Huawei kwuru na ndakọrịta na ngwa gam akporo. Ọ gaghị adị na nke Google, n'ihi igbochi kwuru. Na mgbakwunye, ekwesiri icheta na Google Play enweghị ike iji ya na ekwentị ndị a. Maka nke a, ekwentị ndị China ga-enwe ụlọ ahịa nke ha. Nke a bụ ihe ndị ọrụ nwere ama nke ama ama mara.
Ọ bụ ihe AppGallery, nke etinyerela na ekwentị ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ dịkarịa ala na nke kachasị ọhụrụ. Storelọ ahịa ebe ị nwere ike ibudata ngwa na ekwentị gị. Huawei ga-arụ ọrụ na ịnweta ndị mmepe iji malite ngwa ha na ụlọ ahịa a, ka enwere ike ibudata ha na ama. Ma ugbu a anyị amaghị ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe ga-aga nke ọma.
Enwere ọtụtụ ajụjụ a na-azaghị na nke a. Ha bụ ụbọchị dịtụ mgbagwoju anya, nke ọtụtụ akụkọ na-abata. Ọ bụ ezie na oge nke nkwekọrịta a nwere ike ịbụ ezigbo aka nwee ike ịnweta ozi ziri ezi karị n'otú ọnọdụ a ga-esi gbanwee ọnwa ndị a. Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere otu Huawei ga-esi webata sistemụ arụmọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Sistemụ arụmọrụ nke Huawei ga-adị njikere n'oge mgbụsị akwụkwọ
Nke a bụ otú mgbasa ozi ga-esi lee anya na WhatsApp
The Honor 20 na 20 Pro adịworị eziokwu: anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ọkọlọtọ ọhụụ a!